Me RAKOTOMAVO RAZAFIMANANTSOA HANITRINIAINA : AZA AILIKA AMIN’ NY FILOHA RAVALOMANANA NY TSY FAHOMBIAZANAREO REHETRA – MyDago.com aime Madagascar
Nitondra fanazavana ny mahakasika ny raharaha any Atsimo ny filohan’ny lefitry ny Cst Razafimanantsoa Hanitra tetsy amin’ny Hotel Colbert androany. Tsy mijery fotsiny izahay hoy ny Me Hanitriniaina fa mandray andraikitra momba ny raharaha any Atsimo. fa ela no niantso izahay fa misy herisetra tsy fanajana ny zon’olombelona any Atsimo any. Gaga izahay hoy izy raha naheno fa tsy misy an’izany any fa manao « légitime defense » ny mpitandro filaminana. Ho an’ny mphay lalàna hoy izy dia mahafantatra tsara ny atao hoe « légitime defense ». Ny olona manafika tsy mampiasa izany, fa ny olona tafihana kosa ny manao izany. Fantantsika hoy Me Hanitra fa lazaina fa dahalo , ary tanana manontolo no nodorana sy vonina ny olona no tafihan’ny mpitandro filaminana. Ahoana hoy izy no ilazana fa miaramila manafika no manao « légitime defense ». Misy hoy ny « violation grave de droit de l’homme », izany hoe rehefa miverimberina ny famonoana ny olona fa tsy zavatra iray dia izay no atao hoe « violation grave de droit de l’homme ». Ny « Génocide » kosa hoy izy dia rehefa mihoatra ny 100 ny olona maty. Amin’ity raharaha ity dia efa aman-jatony ny olona maty ary misy zaza ama-behivavy. Noho izany dia tomponandraikitra amin’izany ny fitondrana. Ny 07 febroary hoy Me Hanitra dia iray andro no nanaovana azy, tsy niverimberina io. Iza no tomponandraikitra amin’ny zavatra mitranga any Atsimo. Nisy ny hery manokana napetraka tany ary ny filohan’ny tetezamita niaraka tamin’ny lehiben’ny miaramila no nametraka azy ireo. Tsy nanao ny asa nampanaovina azy izy ireo fa namono olona. Na dahalo na tsy dahalo hoy izy dia tsy afaka mamono olona fa satria tsy manaran-dalàna izany amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Namafisiny fa famonoana olona tsy misy fitsarana no misy eto. Noho izany tsy manaiky ny iray tsikombakomba amin’ny « violation grave de droit de l’homme » ny Ankolafy Ravalomanana. Nitodika tamin’ireo miaramila ny tenany ny hoe hajao ny etikanareo fa aza miditra amin’ny sehatra politika ianareo fa avelao ny mpanao politika no hanao izany.Tsy anjaranareo no manondro na iza na iza fa ho ento any amin’ny fitsarana aloha ilay olona dia ny fitsarana no manameloka azy. Ny tsy fahombiazanareo any Atsimo dia aza ailika any amin’ny ministry ny fiompiana, Tim, ben’ny tanana , lehiben’ny faritra. Ny tsy fahombiazanareo rehetra ao dia aza ailika amin’ny filoha Ravalomanana Marc. Momba ny fahafahana fototra hananan’ny tsirairay dia nambarany fa dradradradraina ao amin’ny tondrozotra andiny faha 17 izany. Tokony hajaina toy ny anakandriamaso io. N’iza n’iza miteny ny marina dia tokony tsy hisy fitsarana mitongilana ohatry ny teo aloha. Nambarany fa naverina eny Tsiafahy ny jeneraly Raoelina. Ny antony hamerenana azy any hoy Me Hanitra dia atao takalonaina. Noho izany dia tsy ekenay izany. Nasiany teny ihany koa ny momba ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana. Tsy mandeha amin’izay laoniny izany satria hita mitongila.Ny zavatra hita dia rehefa ministera mamofopofona mpanohitra dia ahena ny tetibolany.
Auteur Solo Razafy*Publié le 15 novembre 2012 16 novembre 2012 Catégories Politique
17 réflexions sur « Me RAKOTOMAVO RAZAFIMANANTSOA HANITRINIAINA : AZA AILIKA AMIN’ NY FILOHA RAVALOMANANA NY TSY FAHOMBIAZANAREO REHETRA »
Rehefa niresaka momban’ilay hoe génocide ianao ry Me Hanitra, ka nampitahy ny zavatra na fomba fiseon-draharaha tany Atsimo sy ny teny Ambohitsirohitra, nahoana no dia tsy nolazaina fa hoe ny mpanongana anie no namono olona teny ihany koa ê ?
Toa variana dia variana ianao nanazàva hoe génocide ny tany Atsimo, fa ny teny Ambotsirohitra TSY IZY !
Na génocide na tsia ny tamin’ny 7 février 2009, ny vahoaka tsy miraharaha an’izany, fa ny tiany ho fantatra dia ny hoe : Iza no namono olona teny ?
Ankaotr’io lazainareo fa fitoriana ho ataonareo momban’ilay fanendrikendrehana io, tsy azonareo atao angaha ny manao plainte contre X, momban’io è février io ?
razefa dit :
15 novembre 2012 à 17 h 53 min
Raha ny fahitako azy aloha dia Ravalo tsy meloka velively t@marsa 2009 na dia président azy izy taminio,io resaka dahalo sy mikasika@valabe koa izy mbola tsy meloka ary tsy tokony ho melohana na kely aza.Fa tena erreur be lery dia tsy tokony tsy nandeha nitsoaka tany Maurice sy Afrique du sud ry zareo mianakavy dia ity eo zay tohiny ny tantara,tsy tokony anao sonia na démission izy na dia teran’ aza fa nandeha nanao vacances kely aloha zany ny atao hoe stratégie politique,nefa koa mety tsy nahazo visa de longue durée izy raha tsy nanao exilé politique.
Tadidio fa rehefa mandao ny sambo ny commandant de bord nefa ny sambo miletika ny vahoaka mila vonjy dia tsy mendrika ho commandant intsony ny grade mendrika azy fa lasa matelo sisa.
Tsy hoe efa milamina sy vaovonjy ny vahoaka zay ianao vao tonga angataka sy hitomany ny grade maha commandant de bord anao.Ny commandant dia misacrifice foana ary lasa maritiora aza.Fa lery sady sarotaotra no tia fitondrana.
Marina tokoa ny anao Razefa fa ny commandant de bord no miala farany rehefa rendrika ny sambo.Moa ve tsy izy no niala farany?
– Satria nisy tokoa antokon’olona sahisahy niambina ny teny Iavoloha (naheno an’arivony aho) fa rehefa noteren’ny miaramila (sasany) dia niala daholo.
– Satria koa ny tafika mpiambina azy tsy nahaleo ny mpanafika dia niala mora foana dia izy irery sisa no tratra farany teo.
– ny praiministra tamin’izany mba anarany Miaramila nefa nisitaka taminy.
– ny mpanelanelana sahala amin’i tompokolahy Sylla dia nivadi-belirano fotsiny.
– Ny foloalindahy izay nantenaina dia namadika fontsiny.
Ka hiteny ianao hoe: sarotahotra izy, dia azo lazaina fa kerisay daholo ireo olona voalaza ambony ireo, izany hoe:isika mianakavy.
Hilaza ianao hoe: tia fitondrana izy;nahavita izy dia aleo ho azy aloha ny fitondrana, ny an’ny sasany vola no hijanonana eo no sady hamadihana namana,havana,vady,rahalahy ary mpiara-belona.Jereo manodidina anao dia tsapao hoe hatraiza ny fetran’ny vola ary hatraiza ny fihavanana izay nampalaza antsika malagasy!!!anao ny tohiny.
Fahaizana manao pôlitika ve ny mamono tena ?
Iza ilay mpanao kabary teny amin’ny 13 mai dia miafina ao ambadiky ny olona ? Ny mpanao ratsy ihany anie no mahana amin’ity tany ity ê !
Raha i Razefa no frantsay izany tamin’ny 1945, dia tsy nanaiky an’i Dégôla ho prezidà, fa mitovy hevitra an’ireo mpanohana an’i Pétain ?
Mba inona hono izao ny hevitr’ilay Cécile Manorohanta, ry Jemison izay nipingapinga teny ambony esitrady, momban’izao sehon-javatra izao ? Nahafantatra an’izay hitranga daholo ireny ve ?
Efa henonareo ve aloha intégrale-n’ilay conférence natao tamin’ny maraina ê ? Ao amin’ny radio Rindra !
KM! ilay zavatra noteneniny i Mamy Rakotoarivelo ve?
15 novembre 2012 à 19 h 38 min
A l’heure actuelle, il n’y a pas de Transition consensuelle à Madagascar mais une dictature fasciste a déclaré Mamy Rakotoarivelo.*
JE RAJOUTE ,AVEC RAJOELINA Y AURA PAS DE CONSENSUALITE , alors ….?
alors des propositions, on est presque 22 millions, paraît-il, si les 15 millions ( aptes à faire des propositions) proposait chacun une idée,ça ferait au moins 15 millions d’idées.N’est-ce pas, Ravelonarivo?
15 millions ou 20 millions ,oui mais l’urgence et l’essentiel ,le peuple sait :…,et que les leaders les écoutent.
Marina ny fanakianan’i Vy Vato an’ireto Zanakidada ao @ gvt iaraha-mitantana ireto. Matoa izany tsy mandeha ny tetezamita, de ry zareo isan’ny mpitondra ao koa no tsy mampandeha azy. Porofo ireny ningitrika elabe ireny na ny tao @ GVT na ny tao @ Antenimiera, zay Filohan’izany Ramangidy. Tsy vitan’izay, fa raha tena lehilahy sy vehivavy nosoran-dreniny mianaka, mametra-pialana rehefa mahita fa tsy misy fiaraha-mitantana. Inona no mbola mampifikitra eo? Ka kapoaka aloha vao vahoaka. Zahay tsy hiaro tombontsoam-bahoaka zany fa ny hampiverina an’i dada, iharahanay mihinana ihany ny anay.
Faharoa, romotra ny zanadrainivoanjo, fa hanao sonia ny famatsiam-bola ny fifidianana @ alatsinainy izao ny UE, PNUD, Suisse, « NORVEGE » chuuuuuuut ahoana io Norvège io ry zanakidada a!
Nga tena efa kivy, sady efa mahita fa tsy anisan’ny anaty course intsony dadanareo, no arangaranga ndray ty woe, tsisy fifidianana vanona izany eo? Fa ahoana no tsy hisy e? Mafibe tsy laitranareo woa, ny fahaizan’i Rajoelina iny poiltika. Tsy lasan-ko vavany fotsiny otranareo mianakavy, fa ny azy miroso foana na inona blocage na fingana ataonareo, resiny foana. Efa tongasaina @ toetran-drainareo woa ny CI. Arakarakay ny fandrosoan’ny fotoana, no mampibaribary ny hadalan-drainareo. Raha Zuma zay no nihaiky fa olona tsy mamely Rainivoanjo, sady namboariny tsara sy nitodihany lamosina, defa tsisy fika intsony ny @ dadanareo. Tsy Rajoelina intsony zao ny adve nareo, fa mandehana mitabataba any @ireo hamatsy vola ny fifidianana ireo, na gidragidrao Zuma hamerina ny pasipaorony sy hanafoana ilay didy tsy mahazo mivoaka ny territoire. Diversion daholo ny fiatakena an-dRajoelina, fa io problema tsisy pasipaoro sy tsy mahazo mivoaka io aloha no taolana be voalohany. Raha afakareo io, mbola miandry koa ny justice malgache. Tena tsy misaina raitrano marina ireto.
Ary niova ho mafibetgv ny anaran’i bogor an; mivoaka ny toetran-jiolahiny, miovaova endrika, anarana, papiers, sns . . . Hamaly anao miintsy aho zao; ka vakio tsara, Ny olon-kendry raha niditra satria tao no nisy hoe « Miverina tsy misy FEPETRA ny Exilé ary isan’izany MARC RAVALOMANANA, ary efa lalàna io ka mila hampiharina, ary ny olon-kendry tsy mandà mihitsy ny fampiharanareo ny NOTE EXPLICATIVE dia ny art.45. izay atao @ fombam – pitsarana marina, ohatra hoe, rehefa mampiakatra ny voampanga iray, dia foana ny didy nivoaka taloha rehetra, tsy hilaza ny akory ary aho hoe, fitsarana mahefa tokony hitsara azy ve ny fitsarana namoaka ny didy izay hifikiranareeo mafy io? sa fitsarana nanamafisana fotsiny ny fanosoram-potaka teny @ place 13 mai? satria aloha ilay lazaina fa minisitra ao @zao fotoana anie ka ilay nijoro nanaratsy ny dadanay teny eh.1 IZAY? FAHAROA: vy vato, mapme nefa de ireny no ianteheran-dry bogor hay moa lasa mafbetgv izy teo? nanao sonia ny olon-kendrinay ary izahay hanohana azy hijanona ao, satria ny lalàna eken’izao tontolo izao dia io lalàna misy io hoe « Miverina tsy misy FEPETRA ny Exilé ary isan’izany MARC RAVALOMANANA » io. Nanao sonia koa ireo satria nahatsiaro fa mijaly ny vahoaka Malagasy, ka mila ny fiaraha-mientana hamahana ny krizy, ka na hiarahana @ mpifanandrina aza tsy maninona, saingy @ fanatanterahana ny lalàna manan-kery; ry fozaorana isany anefa mbola manohy ny hataony, ka nanentana mafy ny Ankolafin’i Dada mba hiditra ao mba ho tantaniny fa tsy hiara-hitantana aminy, ary izay no tena tetezamita marina aminy. Ary izany no notakiana ka tsy ningitrika ny anaran’izay fa azo lazaina fa grevy hitakiana zavatra toy ny grevy rehetra io, satria Radomelina dia tsy manao fiaraha-mitantana, fa izay niditra tao hiara mitantana aminy araka ny FdeR indray no tadiaviny ho tantaniny. Tsy manaiky izany ny anay nefa tsy hiala ao koa fa izany mantsy no fanirian’ny fozaorana, hoe hiala ao @zay depart zero ndray ny fifampidinihana, dia mbola mba ho eo elaela indray, satria io no lalana mamerina ny dadanay tsisy fepetra izay hezahan’i fozaorana mafy ho ravana. Ny sonia ndray? azo atao ny sonia famatsiam-bola @ CI ary ataovy, fa tsy hisy vola hivoaka izany eo raha tsy manjaka ny demokrasia,sy ny fanajana ny zon’olom-belona, ary indrindra ny fitoniana eto @ firenena, mifalia fotsiny fa hoe mba sonianareo no voarakitra any, de izay.IZAHAY TSY KIVY, NY ANAREO AARY TELO VOLANA EFA TSY NAHARITRA KA VOATERY NIVIDY MIARAMILA HITANA BASY HANONGANANA NY DADANAY, FA IZAHAY IZAO TIA NY TANINAY KA TSY HAMOTIKA AZY TOY NY NATAONAREO FOZAORANA, SATRIA I DADANAY IHANY NO HANAMOATRA IRENY AVY EO, KA TSY HAMPIDITRA AZY @ KIZO IZAHAY; FA NY ANAY MANDEHA MILAMINA 4 TAONA IZAY,HARITRAY FOANA IO, TSY KIVY IZANY ZAHAY, raha tsy mino ianao, jereo ny sary eto rahampitso, dia ho hitanao hoe mbola ireo ny olona tsy kivy. SATRIA IZAHAY TSY MATAHOTRA FA MINO FOTSINY IHANY.
Salut « Nytena Andry tsy domelina » = NATD fa lava loatra 😉 sy Misajaona !
Asakasak’ireo manaratsy fa angamba mba hiova amin’izay rehefa mahita an’ity ?
Izany ahay ka tena Mpitarika !!!
Dia lalina dia lalina loatra izany fitiavanareo azy izany ry Tahiry ! MDR !!
Mba jereo ny zavatra nataon’i domelina ireny ê !
Nodokafan’ny olona dia nanitsa-tay, nitotorebika mihintsy aza ! Ny olana dia lasa feno loto ny tanàna !
Ataovy toy ny fitiavan-janaka io fanohanana io ê ! Rehefa misy tsy mety dia mba tokony atao resaka, atoro sy anarina, fa tsy avela fotsiny amin’izao !
Ho an’Ingahy Mamy : Mamonjy marina ny vahoaka va ianareo ? Sao dia mba tsy mety ireny resaka hoe « fafanay ny heloka vitan’i Rajoelina » ? Anjaran’iza marina no tokony hamafa na tsia ny heloka rehetra vitany ?
Tsy misy hevitra mba azon’ny vahoaka haroso ve momban’io ?
Tohin’ilay resaka io ambony io, satria somary adinoko ilay izy !
Efa nitondra ny « anjara-birikiny » i Sarla, ny Tananews koa (tsy dokam-barotra ho azy ny resaka), nilaza ihany koa fa manana sary manamporofo fa nisy nitifitra » avy any an-damosin’ny vahoaka » izay manamarina ny voalazan’i Sarla, koa dia lasa ihany ny eritreritro ê !
Nilaza fa HITORY AN’I LYLISON IHANY MANTSY IANAREO, ary io olona io tsy hanaiky ny ho voapanga irery ! !!!
hoy ny lohateny « AZA AILIKA AMIN’ NY FILOHA RAVALOMANANA NY TSY FAHOMBIAZANAREO REHETRA »
de hoy zaho hoe: raiso sy dinidinihonareo ihany ny remarque ataon’i km an!
Hay mba nisy nahita ihany ilay fiteny hafahafa toa tsy dia mazava loatra???
fa manana kifafa firy km i Mangidy no ahafafa ny helok’i domelina ??????
Fanahiniana sa izay mihintsy no tena izy???tena @ fo ve nilazany an’io sa voateriterin-javatra???
Tsy misy havany angaha ireny mitsipatsipaka toy ny valala saiky isaky ny faritany ny any atsimo
tsy lazaina intsony, ny very tsy hita poapoaka moa dia efa tsy voatanisa………
Tonga dia lazao ny marina rehetra fa aza sarotsaronana eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Fanazavana kely: mety tsy azonareo io hoe FAFANA NY HELOK’I RAJOELINA io, fa ny dikan’io anie ka ilay FAMPIRISIHANA AZY HIROTSAKA HO FIDIANA ka HIFANINANA @ DADA? satria ny lalàna manakery raha tsy fafàna ny helony araka ny fifanarahana Cotonou : hoe NY MPANONGAM-PANJAKANA DIA TSY MAHAZO MITONDRA FANJAKANA, mazava izany fa raha tsy fafàna ny helony dia tsy tokony ho fidiana akory izy, nefa i Dada sy ny zanany rehetra dia maniry ny hifaninanan’izy mirahalahy mianaka mba tena hahalalana ny marina,na mety ny nakarana teny Ambohitsirohitra na tsia t@ 7 fev 2009, na mety ny nanamasinana an’i Radomelina ho Filoha t@ 21 mars na tsia sns . . . . , mba tsy hanilihana indray rehefa lany soa aman-tsra i Dada hoe koa izaho (Radomelina io)tsy nilatsaka ko, mazava aminareo ireo ambony ireo angamba aloha izay. Sady dada tsy manao valifaty izany ehhhhhh, ary efa nifona t@ Malagasy reheta izy no efa namela ihany koa ireo izay nanao ratsy azy.
Précédent Article précédent : RAKOTOARIVELO MAMY : AMPY IZAY TSY HANDEFITRA INTSONY IZAHAY
Suivant Article suivant : NY FILOHA RAVALOMANANA MARC IHANY NO AN’NY VAHOAKA MALAGASY